Shodan: aitsvaga evabiridzi | Linux Vakapindwa muropa
Kune akawanda enjini dzekutsvaga, asi pasina mubvunzo inonyanya kushandiswa uye inozivikanwa iGoogle. Uyu wakakwanisa kupwanya vakwikwidzi vayo, seBing, kana iyo Yahoo! yekutsvaga injini. Munguva dzichangopfuura, kusazivikanwa kwave kuita senge kune vakawanda, uye mainjini ekutsvaga yewebhu yakadzika nevamwe vakaita saDuckDuckGo vave kuzivikanwa zvakare.
Asi muchinyorwa chino hatisi kuzotaura nezve chero chazvo, asi nezve Shodan (www.shodanhq.com). Munyika inozivikanwa se "Google yevabiridzi", sezvo iri injini yekutsvaga ine simba iyo inokutendera iwe kuwana maseva nemidziyo paInternet inomhanya chaizvo masevhisi. Izvi zvinogona kushandiswa kutsvaga zvinangwa kana kuunganidzwa kweruzivo. Zvichida zvinotiyeuchidza nezveGoogle Dorks uye nechikonzero chakanaka ..., nekuti isu tinogona zvakare kushandisa vashandisi kusefa kusecha.
Uyezve, simba raShodan rakabatana neiyo yeiyo Python programming mutauro kugadzira zvimwe zvinyorwa zvinogona kubatsira zvakanyanya. Iko kusanganisa kunoitwa kugoneka neraibhurari yeShodan yePython. Saizvozvo, seGoogle Dorks, Shondan zvakare ine mafirita ekutsvaga, ayo ari:
guta Zvitsva zvekutsvaga kune rimwe guta.
nyika Tsvaga zvawanikwa kubva munyika yakatarwa.
Geo Mitsva yekutsvaga nekutsanangura latitude uye longitude.
hostname Mhedzisiro chete ndeyezita rezita rakaratidzwa
mambure Kutsvaga kwakanangana nezvikamu zve network.
os Sefa mhedzisiro neimwe yakasarudzika sisitimu yekushandisa.
poti Sefa mhedzisiro nechiteshi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Shodan iyo Google yevanobiridzira